मेरो टिकट खोस्नेलाई किन भोट दिने ?-Nagarikaawaj.com
मेरो टिकट खोस्नेलाई किन भोट दिने ?
एमालेले टिकट नदिएको झोंकमा रन्थनिएका नायक भुवन केसीले शनिबार दरबारमार्गस्थित रानी महल गजलका एक पार्टनर एवं गायक निशान भट्टराईलाई फोन गरेर भने, ‘निशान, आज म तिम्रो रेस्टुरेन्टमा आउँछु । आज मजाले नाच्नुपर्छ । म पनि गाउँछु । मुड फ्रेस बनाउनुपर्यो ।’
स्रोतका अनुसार साँझ ८ बजेतिर रानी महल गजलमा आउँछु भनेर वाचा गरेका भुवन रानी महलको साटो दरबारमार्गकै किंग्सवे रेस्टुरेन्टमा पुगे । त्यहाँ उनको भेट भयो एक पान्डे थरका पुराना दरबारियासँग । ठुला धनाढ्यको भीड लाग्ने किंग्सवे रेस्टुरेन्टको एउटा कुनामा सोफामा बस्दै भुवनले चुरोट सल्काए ।
‘के छ दाई हालखवर धेरै भो नि भेट नभएको’, भुवनले भने । पाण्डे थरका घरानियाँलाई पहिल्यै ह्विस्कीको नशा चढिसकेको थियो । उनले भुवनको प्रश्नको जवाफ दिनुको साटो उल्टै भुवनलाई होच्याउँदै भने, ‘राजनीति गर्न तम्सेका थियौ, खायौ नि लोप्पा । बल्ल पर्यौ भुवन भाई माकुने जालैमा ।’
त्यहाँ पुगेका भुवन त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर हिंडे । सोझै दरबारमार्गको अन्नपूर्ण क्याफेमा छिरे । त्यहाँ सुप मगाएर खाँदै थिए । एकजना पुराना चलचित्रकर्मी पनि त्यहीं भेटिए । ‘भुवन भाइ सञ्चै ?’, ति पाका चलचित्रकर्मीले भने ।
‘केको सन्चै भन्ने दाई । त्यो एमाले भन्ने फटाहाहरुको पार्टीले मलाई बेकारमा बदनाम गरायो’, भुवन निराश भावमा भने, ‘सुसु (सुस्मिता)सँग अलग हुँदा बरु मलाई त्यति पीडा भएको थिएन, यसपाली टिकटको लफडाले बेकारमा टेन्सन दियो क्या दाई । फिल्मी स्टाइल पो भयो । ल हेर्नुस त दाई, कहानीमा ट्वीस्ट हुन्छ नी, त्यस्तै भयो ।’
अभिनयमा खारिएका ति पाका चलचित्रकर्मीले थपे, ‘हो, हो कहानीमा ट्वीस्ट भयो । तर यस्तो अनैतिक ट्वीस्ट त चलचित्रको कथामा पनि हुदैन भाई ।’ यति भन्दै उनले भुवनलाई सान्त्वना दिदै भने, ‘त्यसै पोल्टिक्स इज डर्टी गेम भनिएको हैन नि भाई । त्यसमाथि त्यो एमाले भन्ने पार्टी । त्यसको के कुरा गर्नु ? लिंग नछुिट्टएको भनेर त्यसलाई त्यसै भनेको हैन नि ! न कुनै राष्ट्रिय अडान छ । न कुनै एजेन्डा छ । न गतिला नेता छन् । कसरी हुन्छ सत्तामा जाने र कमाउने धन्दा । चार थरी नेता चारतिर फर्किएका छन् । आफ्नो कुनै अडान छैन । कहिले काँग्रेसको पुच्छर भा’को छ, कहिले एमाओवादीको पुच्छर ।’
केहीबेर घोत्लिएपछि भुवनले भने, ‘बरु राप्रपा नेपालमा गएको भए हुनेरहेछ । कमल थापाले आउनुस् भनेकै थिए । पञ्चायतकालदेखिका साथी छन् । पच्चिस बसन्तमा खेल्दाका साथी छन् । त्यत्रो रातो कार्पेट ओछ्याएर बसेका थिए । त्यो एमालेको त बोलिकै ठेगानै भएन । यस्तो पनि पार्टी हुन्छ ? आज एक थोक भन्यो, भोलि अर्को थोक भन्या छ । एउटा नेताले एक थोक भन्छ, अर्को नेताले अर्को थोक भन्छ । जे मन लाग्यो त्यही गर्या छ । कस्तो वाहियात पार्टी ।’
पुराना चलचित्रकर्मीले थपे, ‘एमाले त्यसै पींध नभएको लोटा भएको हो त भाई । त्यसको के कुरा गर्नु ? बरु, एमाओवादीकै हरेक काम स्पष्ट छ । कमसे कम टिकट दिएपछि फिर्ता त गर्दैनन । सोच बिचार गरेर उम्मेदवारी तय गर्छन् । उनीहरुको सिस्टम्याटिक छ क्या । सबै कुरा । मलाई पनि एमालेमा आउन नभनेका हैनन, तर म त्यही बुझेर गईन ।’
‘मैले टिकट पाएको भए मदन भण्डारीलेजस्तै जित्थे दाई, ती एमालेवालाहरुले मेरो लोकप्रियता नै चाल पाएनन् । अहिलेको हिरो हुँ म ? जुनीदेखि सुपरस्टारसम्म मैले हिट चलचित्र दिएको छु । भुवन केसी इज भुवन केसी नि हैन त दाई । त्यो एमालेको छ नि एउटा नेता, के रे, इश्वर पोखरेल, त्यल्लाई मेरो क्रेज के थाहा ? मलाई लास्टमा धोका दिने यार ?’, भुवनले कड्किदै भने ।
भुवनको कुरा काटदै पाका चलचित्रकर्मीले बीचमै भने, ‘हेर भुवन भाई, अब तिमीले जित्ने थियौ भनेर त म पत्याउन्न । तिम्रो फिल्मी क्रेज होला, तर पोल्टिक्समा त्यति मात्र भएर हुदैन । त्यही भएर त एमाओवादीले रेखा थापालाई टिकट दिएन । रेखालाई टिकट दिनुथियो भने उनको नाम मतदाता नामावलीमा भए नभएको पहिल्यै सोधखोज हुन्थ्यो नि ! त्यसैले हेर भाई, यी मुला दलहरु हामी कलाकारलाई युज गर्न मात्र खोज्छन् । चाहिदाका भाँडा नचाहिँदाका ठाँडा मात्र बनाउँछन् । एमालेले टिकट दिएन भन्दैमा सुर्ता नगर ।’
स्रोतका अनुसार भुवन र ति पाका चलचित्रकर्मीबीचको कुराकानी लामै समयसम्म चलेको थियो । कुरै कुरामा एक पटक उनले यहाँसम्म भने, ‘बरु एमाओवादीसँग लाईन मिलाएको भए टिकट पनि पाइन्थ्यो, जितिन्थ्यो पनि । प्रचण्डजी पनि सेलीब्रेटी, म पनि सेलीब्रेटी । हाम्रो क्यामेस्ट्री र वेभलेन्थ पनि मिल्थ्यो की । उनी पनि नेशनल हिरो, म पनि फिल्मको हिरो । कसो दाई ।’
पाका चलचित्रकर्मी चलचित्रका पर्दामा खलनायकको भूमिका निर्वाह गर्दा हाँसे झैं आफनो पुरानै हास्य शैली निकाल्दै हाँसे, ‘हा..हा..हा…।’ उनी हाँसेको सुनेर वरिपरिको टेबलमा बसेका मानिसले भुवन र ति चलचित्रकर्मीतर्फ हेरे । ति पाका चलचित्रकर्मीले भने, ‘यो बुध्दी तिमीलाई पहिले नै किन आएन भाई ? अब यो देशमा खाने भनेको एमाओवादीले नै हो । प्रचण्डले नै हो । बेकारमा डाँडामाथिको जुनजस्तो पार्टीको पछी लागेर । अरे यार त्यसको पछी लाग्नुभन्दा पहिले मसँग सल्लाह गरेको भए पनि हुन्थ्यो । म मिलाउँथें नि सेटिङ ।’
भुवनले भने, ‘अब एमालेले यसरी काम गर्ला भनेर मैले सोचिन नी दाई । अब भन्नुस् त, आज टिकट दियो, भोलि खोस्यो । त्यो मेरो ठाउँमा एमालेबाट टिकट पाउनेले कसरी जित्ने ? आखिर त्यहाँका जनताले पनि त भन्दा हुन, भुवनको टिकट तिमीले खोसेको भनेर । भुवन केसीको टिकट खोस्नेलाई मेरो फ्यानले किन भोट दिने ? हैन भन्नुस त दाई, अरे यार यो देशको हिरो हुँ नि म, मेरो टिकट खोस्नेलाई दर्शकले किन साथ दिने ? हार्ने पक्का छ ।’
पाका चलचित्रकर्मीले भने, ‘हो नी भाइ, तिम्रो टिकट खोस्नेलाई तिम्रा फ्यानले किन भोट दिने ?’ यति सुनेपछि बल्ल भुवनको मुड शान्त भयो । उनि हाँसे । अनी भने, ‘मेरो ठाउँमा एमालेले हारोस्, अनी भोज खानुपर्छ दाई । त्यो एमालेलाई मेरो पाप लाग्नेछ । कसैको चित्त दुखाउनेको कहिल्यै भलो हुदैन । चाहे त्यो मानिस होस, चाहे पार्टी । भुवनलाई टिकट नदिएर गल्ति गरिएछ भन्ने साबित हुनेछ एकदिन ।’
पाका चलचित्रकर्मी पुरानै शैलीमा हाँसे, ‘हा…हा…हा..।’ भुवन पनि हाँसे । त्यसपछि बल्ल भुवन राति एघार बजेतिर रानीमहल गजलतिर गए । त्यहाँ उनले गायिका निशा सुनारसँग कुनैबेला गाएको आफ्नै पुरानो लोक गीत गाए–
‘पानमा पराग छ
बोल्न मन लाग्दैन निरमाया
दिमाग खराब छ ।’